ဘိန်းဖြူရောင်းဝယ်သူ ၃၀ ကို ဗီယက်နမ် သေဒဏ်ချမှတ်
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘိန်းဖြူရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သူ ၃၀ ဦး ကို သေဒဏ်ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ကြောင်း BBC သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
At 1/21/2014 08:25:00 PM No comments:
အင်ဒိုနီးရှားက မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲဖို့ကြံစည်သူ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလက မြန်မာသံရုံးကို ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ အဓိက ဦးဆောင် ကြံစည်ခဲ့တဲ့ Sigit Indrajit ဆာဂျစ် အင်ဒရာဂျီဒ် ကို ဂျာကာတာတောင်ပိုင်းတရားရုံးက ဒီကနေ့ ထောင်ဒဏ် ၇နှစ်ခွဲ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
At 1/21/2014 05:14:00 PM No comments:
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ညီလာခံကို UWSA ဘာကြောင့်မတက်?
၂၀၁၄ ဂျန္နဝါရီ ၂၀ မှ ၂၂ ရက်အထိ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးဌာနချုပ် လော်ခီးလာ၌ သုံးရက်ကြာ ကျင်းပ သည့် တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT အစည်းအဝေးသို့ ဝ ပြည် သွေး စည်းညီညွှတ်ရေး ကော်မတီ နှင့် ၎င်း၏ မဟာမိတ် ဖြစ်သည့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့တို့ တက်ရောက် ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
At 1/21/2014 03:46:00 PM No comments:
မြို့ပြင်ဧရိယာ တိုးပွားလာမှုအပေါ်တွင် စီးပွားရေး အခြေပြုနေရာ ငါးခု အဆိုပြုမည်
ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (JICA) အနေနှင့် မြို့ပြရန်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးရေး မဟာ ဗျူဟာစီမံကိန်းအရ မြို့ပြင်ဧရိယာများ တိုးပွားလာမှုအပေါ်တွင် စီးပွားရေး အခြေပြု နေရာငါးခု အဆိုပြု မည် ဖြစ်ကြောင်း JICA လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
At 1/21/2014 03:39:00 PM No comments:
သရေခေတ္တရာဇုန်တွင် ကျူးကျော်နေအိမ် ငါးလုံး ဖယ်ရှား
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း) ပြည်မြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိသည့် သရေခေတ္တရာ ပျူမြို့ဟောင်း ဇုန် နယ်မြေ တွင် ခုနစ်လအတွင်း ကျူးကျော်နေအိမ် ငါးလုံးကို ဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်း ပါဝင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုရုံး သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
At 1/21/2014 03:34:00 PM No comments:
ဟိမဝန္တာဘက်ခြမ်းမှ ရွေ့လျား မိုးတိမ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း မိုးရွာသွန်းမည်
ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းများ၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်းမှ ရွေ့လျား ဝင်ရောက်လာသော လေအေး များနှင့် မိုးတိမ် များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း ဒေသအချို့တွင် ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း မိုးရွာသွန်းမည်ဖြစ် ကြောင်း မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာ ထွန်းလွင်က ပြောကြားသည်။
At 1/21/2014 03:27:00 PM No comments:
အမျိုးသမီးများတွင် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်သည့် HPV ကြွက်နို့ရောဂါပိုးက အမျိုးသားများအား ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားစေနိုင်
HPV ခေါ်သည့် ကြွက်နို့ရောဂါပိုးသည် အမျိုးသမီးများတွင် သားအိမ် ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင် သကဲ့သို့ အမျိုး သားများတွင်လည်း ခံတွင်းကင်ဆာနှင့် လည်ချောင်း ကင်ဆာဖြစ် ပွားနိုင်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ခုခံကျ/ ကာလသား ရောဂါတိုက်ဖျက် ရေးစီမံချက်မှ အထူးကုဆရာဝန်ဒေါက်တာမျိုးသန့်က ပြော ကြား သည်။
At 1/21/2014 03:26:00 PM No comments:
First Eleven ၂၀၁၃ ပြည်တွင်းအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ် ကြည်လင်း ရွေးချယ်ခံရ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရအားကစားဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်သော First Eleven Sports Journal မှ နှစ်စဉ် ရွေးချယ်ချီးမြှင့်လေ့ရှိသည့် တစ်နှစ်တာအတွင်း အကောင်းဆုံးဘောလုံး သမားအဖြစ် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်နှင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကစားသမား ကြည်လင်း ရွေးချယ်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရပါသည်။
At 1/21/2014 03:20:00 PM No comments:
ရည်းစားထားသည်ကို အဒေါ်ဖြစ်သူမှ ဆူပူသွန်သင်ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး အဆိပ်သောက်သေဆုံး
၂၀.၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၀၁၅ အချိန် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ လက်ခုပ်ကုန်း နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လက်ခုပ်ကုန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် အဆိပ်သောက်ခဲ့သဖြင့် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး ဗိုက်အောင့်၊ မူးဝေ ကာ ရောက်ရှိကုသနေကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်နေ န၀မတန်းကျောင်းသူ မ----၊ (၁၄)နှစ်ဖြ စ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီး ၎င်းမှာ ၂၁.၁. ၂၀၁၄ရက်နေ့ ၀၅၃၀ အချိန် တွင် သေ ဆုံးသွားခဲ့ ပါသည်။
At 1/21/2014 02:53:00 PM No comments:
အစိမ်းရောင်မြို့တော်စီမံကိန်းအတွက် မြေယာအသုံးပြုမှု အဓိကထား ဆွေးနွေးမည်
အစိမ်းရောင်မြို့တော်စီမံကိန်းအတွက် မန္တလေးမြို့၏ မြေယာအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB)မှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မစ္စတာအလစ်စတဲယားဘလန့်တ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေယာအသုံးပြု မှုနှင့် ပတ် သက်ပြီး ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်မြို့များကို သွားရောက်လေ့လာ ကာ စာတမ်းပြုစုထားပြီး Land Use Managementကို ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ် မည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် အဓိကဆွေးနွေး သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဇန်န ၀ါရီ ၂၀ ရက်တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
At 1/21/2014 12:20:00 PM No comments:
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ချပေးရန် လျာထားသည့် ဆင်းမ်ကတ်အရေအတွက် ပြည့်မီအောင် ချပေးမည်
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မိုဘိုင်းဆင်းမ်ကတ်လေးသန်း ချထားပေးမည်ဟု လျာထားရာ ကျန်ရှိနေ သည့် လအတွင်း လျာထားသည့်အရေအတွက် အတိုင်း ပြည့်မီအောင် ချထားပေးမည်ဖြစ်သည် ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးမှ မိုဘိုင်းအင်ဂျင် နီယာ ချုပ် ဦးခင်မောင်ထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
At 1/21/2014 10:39:00 AM No comments:
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတိုးမြှင့်ရန် မြန်မာနှင့် တောင်ကိုရီးယား ပူးပေါင်း
မြန်မာနှင့်တောင်ကိုးရီးယားတို့အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတိုးမြှင့်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်တွင် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်သည်ဟု တောင်ကိုးရီးယားအခြေစိုက် Yonhap သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
At 1/21/2014 10:37:00 AM No comments:
လွတ်ရန်မသေချာသည့် နိုင်ကျဉ်း ၃၀ ကျော်ရှိနေသေး
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်ကုန်တွင် လွှတ်ပေးမည်ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန် က ဆိုသော် လည်း လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ စာရင်းများအရ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်း ထောင် များတွင် နိုင်ကျဉ်း ၃၀ ကျော် ကျန်ရှိနေပြီး ဇန်န၀ါရီလအတွင်း လွတ်မြောက်ရန် မသေချာသေး ဟု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးရဲအောင်က ဇန်န၀ါရီ ၂၀ တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
At 1/21/2014 10:30:00 AM No comments:
XL1သည် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာသစ်များကို သုံးစွဲထားပြီး မိုင်ပေါင်း(၃၀၀)ကျော် မောင်းနှင်ပြီးပါမှ ဆီ(၁)ဂါလံမျှသာ အသုံးပြုရသည်အထိ ဆီစားသက်သာသည့် ဖန်တီးမှုလည်း ဖြစ်လာသည်။
At 1/21/2014 10:25:00 AM No comments:
အီရန်နိုင်ငံက နျူကလီးယားအစီအစဉ် ကန့်သတ် လျှော့ချရေးအစီအစဉ်ကို ဒီနေ့စပြီး လုပ်ဆောင် နေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂ နျူကလီးယား အေဂျင်စီ IAEA က ပြောပါတယ်။
At 1/21/2014 10:15:00 AM No comments:
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ခူမီးနှင့် ခမီးလူမျိုးများကို အမည်တူသတ်မှတ်ခြင်း ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်နေ၊ ပြောင်းလဲပေးရန် ခူမီးလူမျိုးများ တောင်းဆို
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် ချင်းမျိုးနွယ်စုဝင် ခူမီးလူမျိုးများကို ခမီးဟူသော အမည်ဖြင့် ကုတ်နံ ပါတ် သတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခမီးလူမျိုးများဖြင့် ရောထွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကာ ယင်းအမည်ကို လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိဟု ခူမီးစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစနီအောင်က မဇ္ဈိမ ကို ပြောသည်။
At 1/21/2014 10:08:00 AM No comments:
မြန်မာနှင့်တရုတ် ဆက်သွယ်ထားသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပို့လွှတ်မှုကြောင့် နမ့်ခမ်းတွင် မြေလှုပ်ခတ်ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်မှုအပေါ် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရှင်းလင်း
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကို ဆက်သွယ်ထားသည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပို့လွှတ်မှုကြောင့် ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်က နမ့်ခမ်းတွင် ပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက် မြေကြီးလှုပ်ခတ်သွားသည်ဟု အင်တာနက်တွင် သတင်းထွက်ပေါ်မှုကို စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီး ရှင်းလင်းချက် ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
At 1/21/2014 09:33:00 AM No comments:
မြန်မာ နိုင်ငံထဲ ဝင်ချင်တဲ့ အကြမ်းဖက် သမားတွေ ဖမ်းမိ
ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရ်ှမှာ ဖမ်းမိတဲ့ ပါကစ္စတန် တာလီဘန်နဲ့ ဆက်စပ် သူများ
မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ နယ်စပ် တက်ကနက် မြို့ကနေ တဆင့် မြန်မာ နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိတဲ့ ပါကစ္စတန် တာလီဘန် အဖွဲ့နဲ့ ဆက်စပ်သူ ၃ ယောက်ကို ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ဒက္ကာ မြို့တော်မှာ ဖမ်းဆီး မိခဲ့ပါတယ်။
At 1/21/2014 07:21:00 AM No comments: